အစွန်းရောက်ဝါဒအား ဆန့်ကျင်သည့် ကာတွန်းစီးရီးကို ဗြိတိန်မွတ်စလင် တစ်ဦး ဖန်တီး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သူများကိုမတရားစော်ကားစွတ်စွဲနေမှန်းသိပါလျှက်နဲ့ ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်တော့အမှန်တရားတစ်ခုအတွက်တစ်နေ့နေ့တော့ အဲဒီအုပ်စုတွေထဲမှာပြန်လှန်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ကြောင်း
DASSK should stop playing to the galley asaZat Thama »
အစွန်းရောက်ဝါဒအား ဆန့်ကျင်သည့် ကာတွန်းစီးရီးကို ဗြိတိန်မွတ်စလင် တစ်ဦး ဖန်တီး
အောက်တိုဘာ ၁၂ ၊ ၂၀၁၄ M-Media
– မွတ်စလင်လူငယ်များ အစွန်းရောက်ဝါဒ၏ လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ခြေချမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မိမိ၏ လူလားမြောက်ရာ အချိန်တစ်လျှောက် ရုန်းကန်ခဲ့ရမှုများကို ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်၍ ဗြိတိန်မွတ်စလင်တစ်ဦးက ကာတွန်းစီးရီးတစ်ခုကို ထုတ်ဝေလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ထိုကာတွန်းစီးရီးကို မိမိ၏ ယုံကြည်မှုနှင့် အမှတ်သညာအတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရသည့် လန်ဒန်မြို့ရှိ အဟ်မဒ်ဆိုသူ မွတ်စလင်လူငယ်တစ်ဦးက ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကာတွန်းစီးရီးကို Abdullah X ဟုအမည်ပေးထားသည်။ ထိုကာတွန်းစီးရီးတွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြထားသည်။
“လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အနုနယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီ၊ ရှက်စရာကောင်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ငြင်းဆိုမှုတွေကိုခံရတဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒကြားမှာ ကြားညပ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ စေ့စပ်မှုတွေ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်” ဟု အဟ်မဒ်က ဆိုသည်။
ကလေးဘ၀က ဖတ်ဖူးခဲ့သည့် ကာတွန်းစာအုပ်မှ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအား အားကျခဲ့ပြီးနောက် အဟ်မဒ်မှာ Abdullah X ကာတွန်းစီးရီးအား ဖန်တီးခဲ့ခြင်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများဖြင့် ကြီးပြင်းလာသည့် မျိုးဆက်သစ်များ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖမ်းစားရန်အတွက် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင် လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် “ဆီးရီးယားမှ မွတ်စလင်များအတွက် စဉ်းစားရမည့် အချက် ၅ ချက်” “မိမိ၏ ဒေါသအား အစ္စလာမ်နှင့် တန်းညှိရန် မကြိုးစားပါနှင့်” စသဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာ၊ အစ္စလာမ်ကပြောထားသောဂျီဟတ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်လင်းသော ယူဆချက်များကို တင်ဆက်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ အားလုံးကို YouTube စာမျက်နှာတွင် လွှင့်တင်ထားသည်။
အဆိုပါ Abdullah X ကာတွန်း ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အင်တာနက်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို အသုံးပြုသည့် လူငယ်များအကြား လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အစွန်းရောက်ဝါဒအား ဆန့်ကျင်သည့် အောင်မြင်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် ချီးကျူးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
YouTube သို့ လွှင့်တင်ပြီးနောက် အဟ်မဒ်၏ Abdullah X ကာတွန်းကို ကြည့်ရှုသူများပြားခဲ့သည်။ အဟ်မဒ်ကမူ မွတ်စလင်အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် သရုပ်ဆောင်မှုများကို ထည့်သွင်းထားသည့် Abdullah X ကာတွန်းကြောင့် မွတ်စလင် လူငယ်များ နိုးကြားလာစေလိ့မ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အစွန်းရောက်ဝါဒအား တွန်းလှန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဟ်မဒ်က
“အစွန်းရောက်ဝါဒ ဒါမှမဟုတ် ကြားဖူးနားဝ ဇာတ်လမ်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် တွန်းလှန်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားလည်ထားဖို့လိုပြီး၊ အွန်လိုင်းမှာ လူငယ်တွေ ရှာလို့ရတဲ့ အစွန်းရောက်အချက်အလက်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း နားလည်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အဟ်မဒ်က မွတ်စလင်လူငယ်တစ်ယောက်အား အခြားတိုင်းပြည်သို့ သွားရောက် အသေခံခြင်း၊ မိမိတို့၏ မွေးရပ်မြေတွင် တစ်ခုခုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဆိုပါက မိမိ၏ပြုလုပ်သော ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောင်မြင်ပြီဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Abdullah X ကာတွန်း Youtube စာမျက်နှာ http://www.youtube.com/user/abdullahx
ref_ OnIslam & News Agencies
This entry was posted on October 12, 2014 at 11:21 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.